Alao sary an-tsaina anao ny fahitana ny fahitana ny fampiharana amin'ny alalàn'ny rehetra amin'ny fivarotana lehibe - News - Shenzhen VisionVision Technology Co. LTD
Home > News > Vaovaon'ny indostria > Alao sary an-tsaina aminao ny sary an-tsaina ny fampiharana amin'ny touch all-in-one amin'ny toeram-pivarotana lehibe
Rehefa mandeha any amin'ny toeram-pivarotana lehibe isika, dia hitantsika ny milina fiasan-tsaina rehetra ampiasaina amin'ny toeram-pivarotana lehibe. Ireo mpanjifa izay manintona haingana ny toeram-pivarotana amin'ny hatsaran-tarehy sy ny lamaody. Ny rantsan-tànanao ihany no mila tapanao ny efijery. Hilaza aminao haingana izay tianao ho fantatra, mety, ny fandidiana haingana sy ny fampiasana dia afaka manome serivisy bebe kokoa amin'ny mpanjifa. Ny andiany kely an'ny touch all-in-one no fampidirana manokana anao.
Ny fampielezana fampiasa amin'ny efijery mikasika ny iray-amin'ny-iray dia manome ny mpampiasa serivisy sy fanampiana marobe sy mahomby, manatsara be ny endrika ankapobeny amin'ny orinasa, manintona orinasa maro kokoa, ary manova be ny fangatahana fampahalalana nentim-paharazana an'ny olona.
1. Fitantanana terminal: tohanana ny famonoana sy ny fanidiana ny halavirana lavitra, famindrana fotoana; manohana fanavaozana sy fanavaozana lavitra; fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy ny fiarovana ny terminal sy ny atin'ny fampielezam-peo.
2. Fanovana programa: Afaka manapaka ny faritra rehetra ny efijery ary afaka manampy rohy mikasika; manohana tanteraka ny horonan-tsary / sary / subtitle / logo / daty sy ora herinandro / toetr'andro sy ny faritra hafa izy io ho fampifangaroana efijery malalaka; manohana ny tahan'ny fifanakalozana tena izy, ny laharana laharana an-tariby, ny angona TV Foreign toy ny fampielezam-peo, ny pejy ary ny pejy HTML.
3. Fitantanana programa: Ny programa samihafa dia azo atambatra ao anaty lisitry ny filalaovana, ary azo apetraka koa ny topi-maso mialoha; ny programa dia afaka mamaritra ny daty sy ny fotoana filalaovana, ny lalao voalahatra, ny fidirana an-tserasera, sns. milahatra ny fanohanana ny lisitra milalao, vondrona na tokan-tena.
4. Miaraka amin'ny lahasa fangatahana fifandraisana: ny faritra mikasika dia voalamina malalaka ary malefaka ny lamina; sary afara famolavolana maimaimpoana, bokotra fikasihana maimaimpoana maimaimpoana. Ny faritra mikasika dia mety amin'ny endrika sary, izay mety ho pejy web. Rehefa tsy misy mikasika izany dia hitsambikina ho azy ny écran seho mba hampisehoana ilay horonantsary dokambarotra / na hitsambikina mavitrika amin'ny pejy fandraisana.
Ny etsy ambony dia ny atiny rehetra natolotra ho anao, antenaiko fa hahasoa anao izany. Raha te hianatra bebe kokoa ianao dia azonao atao ny mizaha ny tranokalanay.
Namboarina tamin'ny Janoary 2008 ny Shenzhen Imagin Vision Technology Co., Ltd., mifantoka amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny fivarotana vokatra solosaina vaovao amin'ny tsena anatiny sy ivelany; Taorian'ny taona maro nivoarana, ny orinasa amin'izao fotoana izao Solosaina rehetra-in-iray, maro-mikasika rehetra-in-one, kafe amin'ny Internet sy gaming all-in-ones, solosaina mini indostrialy ary solosaina cloud cloud manana traikefa manan-karena amin'ny famokarana vokatra sy fahaiza-manao matanjaka matanjaka . Amin'izao fotoana izao, ny vokatray dia be mpampiasa amin'ny indostria isan-karazany, toy ny: fanabeazana, birao, hotely, lalao e-fanatanjahantena, rafitra CASINO, sehatry ny fialamboly ara-pahasalamana sy an-trano.
Ny famoronana sanda tena izy ho an'ny mpanjifa no tanjonay orinasa. Ny orinasa dia nanolo-tena hatrany amin'ny fanatsarana ny fampivoarana ny vokatra sy ny fahaiza-manaony hamenoana ireo filan'ny mpanjifa isan-karazany sy isan-karazany. Ny orinasanay dia mitazona fifandraisana akaiky eo amin'ny famatsiana sy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpamatsy ambony toa an'i Intel, Gigabyte, Asus, BOE ary Samsung. Mandritra ny fifantohana amin'ny rafitry ny rojom-panomezana, ny orinasa dia mandinika tsara ny lanjan'ireo mpanjifa sy mpanjifa. Ny orinasa dia niara-niasa tamin'ny orinasa lehibe maro sy ivelany marika ODM, toy ny marika fampisehoana fanta-daza ViewSonic & reg; ary ny lisitra amerikana lisitra AMAYA GAMING & reg ;, ary ny marika anatiny malaza GreatWall & reg; , Hedy & reg ;, ZTE ZTE & reg ;, sns.; nanomboka ny taona 2015, nanomboka nifantoka tamin'ny fananganana fantsona anatiny sy ny varotra marika tsy miankina "Imagin Vision Vision ThinkView & reg;" ny orinasa. solosaina rehetra ao anaty iray ary solo-saina solo-tontolo iainana ny e-sports. Ny vokatra "Unique; maharitra, tsy manam-petra" dia eken'ny mpanjifa tsara.
Teo aloha:Torolàlana ho an'ny solosaina ho an'ny solosaina rehetra
Manaraka:Fampiharana multi-function an'ny milina iray mikasika